JJ Abrams Anoti Anonzwa Rombo Rokushandira Apple TV + | Ndinobva mac
Nhasi anodzidzisa paApple TV + akateedzana Nyaya yaLisey, akateedzana anosanganisira 8 episodes zvichibva pane eponymous novel naStephen King uye izvo zvine kubatana mukugadzirwa kwemutungamiriri JJ Abrams. Kuenderana neakatanga chirongwa ichi chitsva, Abrams akapa bvunzurudzo kuna Decider.
Muhurukuro iyi, Abrams anoti dzino dzakateerana rakasiyana zvachose chirongwa kumabasa akapfuura naStephen King. Sekureva kwake, King akabatana nekambani yake yekugadzira kuti vabvunze kana vaifarira kuunza nhaurwa yake yaanofarira kuchidzitiro chidiki.
Abrams akataura izvozvo aifarira nezve zanoKwete chete nekuti ndeye huru yake, asi zvakare nekuti aiziva zvazvaireva kuna King kuunza bhuku rake raanofarira kuchidzitiro chidiki. Muchokwadi, Ling anga achitarisira kugadzirisa bhuku racho kuita serial fomati.
JJ Abrams anoti:
Paunenge uchiverenga nyaya, munhu wese anoona chakatosiyana chinhu. Yakanaka seiro bhuku iri uye uye zvakare rakatsanangurwa sepasirese, novel inogara ichizove mumusoro mako neimwe nzira. Zvichida nekuda kwenzvimbo, nekuda kwehukama uye nekuda kwevanhu pachavo. Unounza sei munhu akaita saLisey kuhupenyu? Izvo zvakanyanya kuomarara kupfuura zvinoita?
Iye director director anogona zvakare kuwana nguva yekutaura nezvehukama hwake neApple TV +. Rangarira izvo Abrams akamboshanda kuApple TV + mukugadzirwa kweDiki Izwi uye inoratidza kuti kune mamwe mapurojekiti mumabasa.
Ndichati ndiri fan rakakura reApple TV + vanhu uye ndakada ruzivo kusvika parizvino. Ehezve, mu "Nyaya yaLisey" ivo vanga vari shamwari dzinoshamisa. Ini ndinofunga kuti, pakupedzisira, mukambani hombe, muketani hombe, ndivo vanhu varipo, vane ruoko rwepamusoro, uye vaunonzwa navo kuti unobvumirana kana kupokana. Ini ndinonzwa kusimba rombo rakanaka kushanda nevanhu kuApple nekuti ini ndinofunga zvinoita sekunge tiri kuona zvinhu zvinotinakidza isu tese panguva imwechete nenzira. Saka handina kunge ndanyanya kufara kushanda neApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » JJ Abrams anoti anonzwa rombo rakanaka kuti anokwanisa kushandira Apple TV +
Nhasi uno Apple TV nhepfenyuro inotanga + Nyaya yaLisey